FIFIDIANANA : Hampandany ny kandida Naina Andriantsitohaina ny depiote Rossy
Olona mitovy fijery amin’ny Filoham-pirenena no ilain’ny tanànan’Antananarivo. 4 novembre 2019
Tsy misy fampandrosoana azo antenaina eto an-drenivohitra Madagasikara raha sanatria ka mifanohitra amin’izany ny zava-hiseho. Mangetaheta fiovana ny vahoaka ary Antananarivo mamiratra sy mandroso no ilainy.
Mitaky olom-baovao sy madio tsy mitondra « casserole » ny renivohitry Madagasikara mba hahafahana mamerina indray ny lazan’ity farany. Izany rehetra izany no naharesy lahatra ny depiote Rahasimanana Paul Bert na Rossy sy ny kandida ho mpanolotsain’ny tanàna Raharinirina Clémence ary fikambanana maro ao amin’ny Boriborintany faha IV hampandany ny kandida laharana fahefatra Andriantsitohaina Naina.
Tao amin’ny kianjan’ny Kanto no nanaovan’ireto fanambaràna, ny sabotsy teo. « Hanao izay hahalany an’ Andriantsitohaina Naina ho Ben’ny tanàna izay miray saina sy mitovy vina amin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina izahay », hoy i Rossy.